चलचित्र विकास बोर्डबाट पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई निकिताको प्रश्न- कुनै दलको झन्डा नबोकी नहुने हो?
तपाईंको 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' नारा 'समृद्ध नेता सुखी कार्यकर्ता' बन्ला !
असार २४, २०७५| प्रकाशित १९:२९
काठमाडौं- पूर्वसरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल पदमुक्त भएकी छिन्।
आइतबार उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट अवकासपत्र बुझेकी छन्।
यसैबीच, सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र बुझाउने तयारी गरेकी छन्। उनले पत्रमा आफ्नो राजनीतिक नियुक्ति नभएको भन्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेर बोर्ड अध्यक्ष बनेको दाबी गरेकी छिन्। विदेशबाट आफ्नै देशमा केही गर्ने सोच बोकेर आए पनि राजनीतिक खेलले निराश पारेको उनले उल्लेख गरेकी छिन्।
पौडेलले समय मिलेसम्म मंगलबारसम्ममा पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने योजना रहेको बताइन्।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीलाई निकिता पौडेलको खुला पत्र:
राजनीति नै गरेर मात्र ठूला पद प्राप्त हुने हो भने विदेशमा गएर पढेर म जस्ता व्यक्तिहरु किन स्वदेश फर्कनु? अध्ययन र कार्यक्षमताको मूल्यांकन नहुने र ठूला नियुक्ती जति राजनीतिक दलका मानिसहरुले मात्र पाउने हो भने पढेर सिकेर जानेर वा कमाएर स्वदेश किन फर्किनु? चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको रुपमा मैले झन्डै ७ महिना काम गर्ने अवसर पाएँ।
मेरो नियुक्तिलाई राजनीतिक भनिए पनि यसमा मेरो असहमति छ। म कहिले पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको समर्थक, विरोधी, नजिक, टाढा भइनँ। यो मैले कहिले पनि नजानेको विषय हो।
हिजो म अध्यक्ष नियुक्त हुँदा तत्कालीन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि मेरो नियुक्तिको विरोध गरेको थियो, आज देउवा सरकारको नियुक्ती भनेर तपाईँको सरकारले नियुक्ति बदर गर्‍यो। म जस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले आफ्नो योग्यता र क्षमता देखाएर काम गर्नै नपाइने हो त? देशको मात्रै झन्डा बोकेर नपुग्ने? कुनै न कुनै राजनीतिक दलको झन्डा नबोकी नहुने हो? म चलचित्र बुझ्दै, हेर्दै र सिक्दै हुर्किएकी हुँ।
लाइट, क्यामेरा, एक्सन मैले गर्भमा नै सुनेका शब्दहरु हुन। यस अर्थमा चलचित्र क्षेत्र मेरो रगतमै बगेको छ। यसै क्षेत्रमा समर्पित हुने उद्देश्यले मैले अमेरिकी युनिभर्सिटीबाट यसै क्षेत्रको विषयमा स्नातकोत्तर गरेर मनभरि उमंग, जोस, जाँगर र सर्टिफिकेट बोकेर आफ्नै देशमा केही गर्छु भनी फर्किएँ। १८ वर्षको इतिहास बोकेको चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्षज्यूहरुले गर्नुभएको कार्यको मूल्यांकन गर्ने हैसियत त मेरो छैन। तर, विगत ७ वर्षदेखि यो वा ऊ बहानामा अड्केको र एक पाइला पनि नसरेको बक्स अफिस प्रणालीलाई म र मेरो टिमले ७ महिनामा लागू हुन तयार पारेका छौं। यसो भनेर मैले कसैको विरोध गरेकी होइन बरु आफ्नो टिमको अहोरात्र खटाइ र अथक मिहिनेतको दिल खोलेर प्रशंसा गरेकी हुँ।
यतिखेर जब बक्स अफिस लागु हुन केही दिन मात्र बाँकी छ यस्तो अन्तीम समयमा गरिएको नियुक्ति बदरले हाम्रो ७ महिनाको मिहिनेत पानीमा जाने प्रबल सम्भावना छ। मपछि नियुक्त हुने अध्यक्षज्यूको कार्य क्षमतामा प्रश्न गरेको होइन र यो क्षेत्रमा सबैभन्दा सक्षम नै मै हुन् दावी पनि गरेकी छैन। तर, केही महिना मैले काम गर्न पाएको भए म र मेरो टिमले सरकारलाई दिने उपलब्धिबाट साँच्चै नै तपाईँको सरकार र माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूले गर्व गर्न पाउनुहुन्थ्यो।
मेरो कार्यक्षमता र मैंले सरकारलाई बुझाएको भावी योजनाको मुक्तकण्ठले तारिफ गर्नुहुने माननीय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीज्यू र आदरणीय सचिवज्यूका स्याबासीहरु अझै पनि मेरो मानसपटलमा ताजा छन्। तर, त्यो स्वाबासी र यो निर्णयको बिच कुनै तारतम्मे नमिलेकोमा दुःखी मात्र भएकी हुँ। मैले बकाइदा जाँच दिएर, अन्तरर्वार्ता दिएर, खुला प्रतिस्पर्धामा आफूलाई सबै प्रतिस्पर्धीभन्दा सक्षम देखाएर प्राप्त गरेको नियुक्ति हो। राष्ट्रिय पत्रिकामा छपाएर माग गरिएका आवेदकहरुबाट चुनिएको व्यक्तिको नियुक्ति कसरी राजनीतिक नियुक्ति भयो त्यो मैले बुझ्न सकेकी छैन। यो पत्र मार्फत मैंले आफ्नो पुनर्वहालीको याचना गरेकी होइन।
म २१औं शताब्दीकी सक्षम महिला हुँ प्रधानमन्त्रीज्यू, यो देशको संविधानले दिएको हक अधिकार बुझेकी छु, कर्तव्य पालना गर्न जानेकी छु। जति समय मैले चलचित्र विकास वोर्डका लागि दिएँ त्यती समय आफ्नो व्यवसायमा दिएको भए मेरा लागि त्यो निकै फाइदाजनक हुने थियो। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षका हैसियतले निर्णयहरु गर्दा मैंले आफ्नो व्यवसाय र आफ्नै परिवारका सदस्यहरुको समेत विपक्षमा उभिनु परेको छ। बक्स अफिसको सुरुवात आफ्नै हलबाट गरेकी हुन्, आफ्नै भाइले निर्माण गर्दै गरेको चलचित्र ‘रोजी’ को को सुटिङ आफैं गएर रोकेकी छु। र, यस्ता अनगिन्ती दृष्टान्तहरु छन् जसलाई प्रस्तुत गरिरहँदा आफ्नो बखान गर्न खोजेकी अर्थ समेत लाग्न सक्छ।
मलाई सरकारी तलब, सुविधा, पद आदि कुनै कुराको पनि लोभ थिएन र छैन। खालि एउटा दुखेसो छ कि म मात्र होइन विभिन्न देशका डिग्री लिएका धेरै होनहार जोशिला युवाहरु यहाँ छन्, जो आफ्नो देशमा केही गर्नु पर्छ भनेर लागिपरेका छन्। के तिनले पनि उच्च ओहदाको सरकारी जागिर खान कुनै न कुनै राजनीतिक दल वा नेताको घर दैलो धाउनैपर्छ? चाकडी बजाउनैपर्छ? यदि कुनै पनि राजनीतिक दलको आशीर्वादबिना स्वतन्त्र नागरिक बनेर यो देशको सेवा गर्न पाइन्न भने तपाईंको 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली'को नारा 'समृद्ध नेता सुखी कार्यकर्ता' मात्र बन्न पुग्नेछ। यो मेरो व्यङ्ग्य होइन, चिन्ता हो।
आफ्नो ज्ञान र क्षमता देखाउने अवसर फेरि पनि मिल्ने छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। र म चलचित्र विकास बोर्डमा भए पनि नभए पनि मेरो नाभीसँगै गाँसिएको चलचित्र क्षेत्रको उत्थान, प्रर्वधनका लागि मेरो पूरै जीवन समर्पित छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने, नेपालको लोकेसनमा विश्वभरका सिनेकर्मीलाई सुटिङ गर्न आमन्त्रण गरी चलचित्र पर्यटनको विकास गर्ने, फिल्म सिटी निमार्ण गर्ने, पुराना चलचित्रलाई डिजिटाइज गरी भावी पुस्ताका लागि संरक्षित पार्ने, विशिष्ट योगदान दिएका पुराना चलचित्र साधकहरुलाई सम्मान गर्दै नयाँ जेनेरेसनका नवयुवक चलचित्रकर्मीहरुसँग हातेमालो गरेर नेपाली चलचित्रको सुन्दर भविष्य कोर्ने जस्ता कैयौं मेरा योजनामा ब्रेक लागेको छ।
तर, चलचित्र विकास बोर्ड मेरो जागिर होइन सामाजिक जिम्मेवारी हो। योगदान दिन पद नै चाहिन्छ भन्ने केही पनि छैन र चलचित्र क्षेत्रलाई योगदान दिने मेरो यात्राको यो कास्टिङ मात्र हो, मध्यान्तर पनि होइन, दि इन्ड त हुँदै होइन!'
Bikram Bahadur Basnet
ए नानी झण्डा नबाेकेकाे भए तिमीले त्यहा नियुक्ती पाउने नै थिएनाै नि हाै । तिमिले बाेकेकाे झण्डाकाे म्याद सकियाे अनि तिमीलाइ नि हटाए । नैतिकता भएकाे भए चुनाव हारेकाे सरकारले दिएकाे नियुक्ती नै लिनुहुन्थेन । तर यतिन्जेल खाइहाल्याै । अब चित्त बुझाउ । बरु अाफ्नै हल छ तीमि राम्री नी छाै । फिल्म खेल । हामी नि हेर्न अाउला तर याे झण्डे नियुक्तीमा र्याल चुहाएर नबस नानी ।